Kooxda I.L.S oo Ku Guulaysatay Ciyaaraha 3×3 ee kubadda Kolayga +Sawirro
Last update: Sunday, June 23 2019 - 23:17:01
Wednesday June 17, 2015 - 13:29:48 in Xiriirka Kubadda Kolayga by Nocsom Editor
Kulamadi semi finaalka iyo fiinaalka ciyaaraha kubadda kolayga 3×3 oo galabta la wada ciyaaray ayaa semi finaalka koowaad waxaa wada ciyaarahay kooxaha Dekedda iyo Heegan waxaana 13-11 ay guusha ku raacday kooxda Heegan.
Kulanki labaad e Semi n=Finaalka waxaa wada yeeshay kooxaha I.L.S iyo Goobjoog waxaana 12 -9 ku adkaaday kooxda I.L.S.oo sidaa finaalkaug gudubtay .
Labada koox Heegan iyo I.L.S oo a si wayn ugu loolamay fiinaaladii ugu dambeeyay ee ciyaaraha kubadda kolayga ayaa kulankan ku hardamay waxaana ciyaarta waqtigii loogu talo galay ay ciyaarta ku idlaatay barbaro 15-15, waqti dheeri ah oo lagu daray waxay 17-16 guusha lahoyday kooxda I.L.S.
Gebagabdi waxaa halkaas ka hadlay Kusimaha Xoghayaha XSKK Cabdi Cabdulle Baasaale waxuuna sheegay in tartankan uu bilow ahaa jawi wanagsana ku ku dhamaaday waxuunamahd celin u soo jeediyay dhamaan kooxihiika qayb galay tartanka.
Sidoo kale waxaa halkaas ka hadlay Madaxa Shirkada Starsom Trevelin oo tartanka maalgelisay Axmed Daahir , waxuuna sheegay in ay joogteyn doonaan maali gelinta taratamada ciyaraha si isboortiga soomaaliyeed horumar u gaaro waxuuna si gaar ah u xusay in taratankan 3×3 ay sanad walba maal gelin ku samayn doonaan.
Ugu dambayn waxaa halkaas ka hadlay Agaasimaha waaxda isboortiga ee wasaaradda dhalinyarada Cabdullaahi Aaboow Xuseen , waxuuna mahad helin u jeediyay XSKK oo tartankan si wanaagsan u qabtay iyo shirkada Starsom oo ku dheeratay in ay maal geliso tartankan waxuan shirkadaha ganacsiga ugu baaqay in ay ka qayb qaataan horumarka isboortiga dalka.
Ugu damabyn waxaa halkaas lagu bixiyay abaalmarinaada kaalmaha waxaana koob aad uqrux badan la gudoonsiiyay kooxda I.L.S oo gacanta ku dhigtay koobkii labaad sanadkan 2015 kadib koobkii Jenaraal Daa’uud.